Waqooyi bari Hindiya Hill Station Tour. Wac + 91-993.702.7574 si aad ballansatid
Waqooyi bari Hindiya Hill Station Tour
Haddii aad tahay qof jecel dabeecadda oo aad rabto in aad la kulanto dhulalka buuraha duurjoogta ah iyo bannaanka leh cagaaran cagaaran, ka dibna North East India Hill Tour Tour waa adiga. Isticmaalka 7 ayaa sidoo kale loo yaqaan 'Land of Seven Sisters', Waqooyiga Bariga Hindiya waa daaweyn dabiici ah oo loogu talagalay dhammaan noocyada safarka. Sanduuqa Qumaanka "Sandboosh" waxay bixiyaan qiimaha ugu wanaagsan Waqooyi Bari Hill Hill Tour Tour. Waxaa ku jira kaymaha ugu caansan, macbudyada qadiimka ah, buuraha barafka lagu riixo, dooxooyinka qulqulaya, haraha dabacsan, iyo qulqulaha biyaha, mar kasta oo Waqooyi Bari
Hindiya waxay dareemeysaa inaad ku jirto Wonderland. North East India Hill Station Tour waxay noqon kartaa khibrad kasta oo socotada ah. Waxay leedahay jacayl u gaar ah oo kaa saari doona cagahaaga! Waqooyi Bari Isniinta Hill Hill waxay ku buuxsantaa buuraha quruxda badan, cawska cagaaran oo hoy u ah kumanaan gogo 'flora iyo fauna. Waa inaad si dhab ah u qorsheysaa safar si aad u hesho North East Hill Stations waayo aragnimadaas farxad leh.
Gobol kasta oo Waqooyi Bari Hindiya wuxuu leeyahay qurxin dabiici ah oo cajiib ah oo cajiib ah muuqaal qurux badan oo ay ka baxdo qof kasta oo safar ah oo soo jiidanaya oo soo jiitay. Si aad u hubiso inaad leedahay qibrada ugu wanaagsan Waqooyi Barri Hindiya, hubi inaad haysato saaxiibka safarka sida Sanduuqa cows, kuwaas oo had iyo jeer ku dadaalaya inay siiyaan wax walba oo ugu fiican. Waxaanu bixinnaa baayacmooyinka dalxiiska ee ugu wanaagsan Waqooyiga Hindiya.
Goobta Xarumaha Hill-ka ee loogu talagalay Fasaxyada Kulaylaha ayaa ah kuwa ugu haboon ee sabab kasta oo ka mida maskaxdaada haddii aad tahay qof safar gaaban ama si fudud qofkii raba inuu dib u fadhiisto, nasiyo oo uu ku raaxaysto adduunka sumcadda ah. Wadashaqayntu waxay dadka ku soo dhawaysaa sidii ay isku wada wadaagaan. Kaalay si aad u fasaxdo inaad ku raaxeyso riyadaada dhabta ah ee Sandbirdhiga 'Sandbooks' oo aad u xiiso u leh Woqooyi Bari East Hill Station.
[Xiriir qaab-7 404 "Ma Found"]
Waqooyi Bari Waqooyi
Code Code: 027
Barnaamijka Habeenada 09
Code Code: 022
Code Code: 121
Barnaamijka Habeenada 07
Code Code: 120
East Indian Extravaganza Tour
Code Code: 122
Bariga Hindida Hill Hill